राष्ट्र बैंकको भवन शिलान्यास, अर्थमन्त्री र गर्भनरले के भने ? - Aarthiknews
राष्ट्र बैंकको भवन शिलान्यास, अर्थमन्त्री र गर्भनरले के भने ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ भवन शिलान्यास भएको छ । सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भवन शिलान्यास गरेकी हुन् । आगामी ३० महिनाभित्र भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । भवन शिलान्यासका क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले निर्धारित समयमै भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सुझाव दिइन् ।
आम सर्वसाधारणलाई वित्तीय पँहुचमा ल्याई कृषि, पर्यटन, ऊर्जा तथा जलस्रोतको क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मुलुक आर्थिक पुनर्निर्माणमा पनि जुटेकाले आर्थिक वृद्धिसहितको विकासमा लागेको बताए ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मुलुक अहिले आर्थिक क्षेत्रकै पुनःनिर्माणको चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले आर्थिक वृद्धिका साथै सामाजिक न्यायमा आधारित वितरणलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिएको छ भनले भने । लगानीको वातावरणका लागि सरकारले काम गरिरहेको भन्दै उनले मुलुकलाई विद्युतीय र बंैकिङ कारोवारयुक्त बनाउन अभियान सञ्चालन गरिएको बताए ।
बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले विनाशकारी भूकम्पबाट बालुवारटारस्थित केन्द्रीय कार्यालय, थापाथलीस्थित कार्यालयलगायत प्रभावित भए पनि भूकम्प गएको दोस्रो दिनदेखि सेवालाई निरन्तरता दिएको जनाए । गर्भनर डा. नेपालले राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षमतको विकास गर्दै सबै नेपालीको बैंक खाता अभियान सफल बनाउन काम गरिरहेको बताए ।